Ekpere na-agwọ ọrịa maka ịda mba mgbe ọchịchịrị gbara
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 5, 2020 Septemba 5, 2020
Ọnụọgụ nke ịda mba n'ike arịala elu maka ọrịa na-efe ụwa. Anyị na-eche ụfọdụ oge kachasị ike ka anyị na-alụ ọgụ megide ọrịa na-emetụta ezinụlọ na ndị enyi, agụmakwụkwọ ụlọ, enweghị ọrụ na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe gara aga egosila na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 n’ime ndị okenye iri na abụọ kwuru na ha dara mbà n’obi, akụkọ ndị kasị ọhụrụ na-arụtụ aka ịrị elu okpukpu atọ nke mgbaàmà nke ịda mbà n’obi na United States. Obi ịda mba nwere ike isi ike nghọta dịka ọ na-emetụta ndị mmadụ n'ụzọ dị iche. Nwere ike inwe mmetụta nke ịtụ ụjọ na enweghị ike ịrụ ọrụ, ị nwere ike ịnwe ibu n'ubu gị nke na-agaghị ekwe omume ịma jijiji. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ dị gị ka isi gị dị n'ígwé ojii ma na-ele ndụ anya mgbe niile dị ka onye ọbịa.
Ndị Kraịst na-enwe nkụda mmụọ, Akwụkwọ Nsọ ekwughịkwa banyere ebe a e wusiri ike. Da mba abụghị ihe “ga - apụ apụ”, mana ọ bụ ihe anyị ga - alụso ọgụ site na ọnụnọ na amara Chukwu N’agbanyeghi nsogbu ị na - enwe nke mere ka ịda mba daa, azịza ya ka bụ otu: weta ya. Site na ekpere, ayị nwere ike ị wezuga onwe anyị na nchekasị ma nata udo nke Chukwu.Jịsọs kwenyere ma kwupụta ịda mba anyị mgbe Ọ sịrị, "Bịakwutenụ m, unu ndị ike gwụrụ na ndị e boro ibu dị arọ, na M ga-enye gị ezumike. Nyaranụ yok m, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na adị m umeala n’obi, dịkwa umeala n’obi, unu ga-achọta izu ike maka mkpụrụ obi unu. N'ihi na yok m dị ụtọ, ibu m dịkwa mfe ”.
Nweta izu ike taa ka ị na-ebu ibu arọ nke ịda mba n’obi nye Chineke n’ekpere. Bido ịchọ ọnụnọ nke Chineke: O nwere ike iwetara gị udo. O nwere ike isiri gị ike ịmalite ikpe ekpere mgbe ihe na-echegbu gị. Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri gị ike ịchọta okwu ị ga-ekwu. Anyị achịkọtara ekpere ndị a maka ịda mba iji nyere aka duzie ma duzie echiche gị. Jiri ha mee ha nke gi ka ị na - amalite ịhụ ìhè na njem ahụ.
Ekpere maka ịda mbà n'obi
Taa anyị abịakwute Gị, Onye-nwe-anyị, na obi, uche na mmụọ nke nwere ike isiri ike idebe isi ha n’elu mmiri. Anyi na-ario n’aha gi ka inye ha ebe mgbaba, enwu-enwu nke olile-anya na Okwu eziokwu nke na-azọpụta ndụ. Anyị amaghị ọnọdụ niile ma ọ bụ ọnọdụ niile ha chere ihu, mana Nna nke Eluigwe maara.
Anyị na-arapara n’ebe Gi nọ n’olileanya, okwukwe na n’ezi-okwu na ị nwere ike ịgwọ ebe anyị merụrụ-arụ ma dọpụta anyị na mmiri gbara ọchịchịrị nke ịda mba na obi nkoropụ. Anyị na-arịọ n’aha gị ka ị hapụ ndị chọrọ enyemaka ka ha kpọtụrụ enyi, ezinaụlọ, ụkọchukwu, onye ndụmọdụ ma ọ bụ dọkịnta
Anyị na-arịọ gị ka ị hapụ mpako nke nwere ike igbochi ha ịrịọ enyemaka. Mee ka anyi nile hu izu ike, ike na ebe mgbaba n'ime Gi. Daalụ maka ịnapụta anyị na inye anyị ntakịrị nghọta nke ibi ndụ zuru oke na Kraịst. Amen. (Annah Matthews)
A ekpere na ọchịchịrị ebe
Nna bi N’igwe, naanị gị bụ onye ndebe nzuzo m ma mata ebe kachasị m ọchịchịrị n’ime obi m. Sir, a nọ m n’olulu nke ịda mba. Enwere m ike ọgwụgwụ, oke ọnụ na erughị eru maka ịhụnanya gị. Nyere m aka n'ezie ịtọhapụ ihe ndị na-eme m mkpọrọ n'ime obi m. Dochie ọ struggleụ m na ọ yourụ gị. Achọrọ m ka ọ myụ m laghachi. Achọrọ m ịnọ n'akụkụ gị ma mee ememe a nke ị kwụrụ nke ukwuu iji nye m. Daalụ sir. Bụ n’ezie onyinye kasịnụ. Were m n’ọ inụ Gị, n’ihi na m kwenyere na Ọ ofụ Gị, Nna, bụ ebe ike m dị. Daalụ, Onyenwe anyị ... Na Aha Jizọs, Amen. (AJ Fortuna)
Mgbe ibu karịrị gị
Ezigbo Jesus, daalụ maka ịhụ anyị n'anya nke ukwuu. Obi m n’adị arọ taa m na agba mgba ikwere na m nwere nzube. Ọ na-adị m ka ọ na-adị m ka m mechisịrị ọnụ.
Jesus, a na m arịọ gị ka ị gbaa m ume ebe m na-adịghị ike. Na-ekwu okwu obi ike na obi ike n'ime mkpụrụ obi m. Ka m mee ihe ị kpọrọ m ka m mee. Gosi m mma n’ime ọgụ a ị hụrụ. Gosi m obi gị na ebum n’uche gị. Meghee anya gi ka ihu mma n’agha a. Nye m ike ịkwụsị ịlụ ọgụ gị kpamkpam ma tụkwasị nsonaazụ ya.
Ọ bụ gị kere m. Ma m karịa ka m ma onwe m. Know maara adịghị ike m na ike m. Daalụ maka ike gị, ịhụnanya, amamihe na udo n'oge a nke ndụ m. Amen. (AJ Fortuna)
Nnwere onwe pụọ ịda mbà n'obi
Nna, achọrọ m enyemaka gị! M na-atụgharị mbụ gị. Obi m na-etiku gị na-arịọ ka aka ntọhapụ na mweghachi gị metụta ndụ m. Duzienụ ndị m zọpụtara ma họpụta ka ha nyere m aka n’oge ọchịchịrị a. Anaghị m ahụ ha, Onyenwe anyị. Mana enwere m olile anya na ị ga-eweta ha, na-ekele onwe gị ugbu a maka ihe ị na-eme ugbu a n'etiti olulu a! Amen. (Mary Southerland)
Ekpere maka nwatakiri na-agbasi mbọ ike
Obi oma, I kwesiri ntukwasi obi, mana echefuru m ya. Ọtụtụ mgbe m na-anwa ịhazi ọnọdụ ọ bụla n'echiche m n'amaghị gị ọbụlagodi otu oge. Nye m okwu ziri ezi iji nyere nwa m aka. Nye m obi nke ịhụnanya na ndidi. Were m ka m chetara ha na gị na ha nọ, ị ga-abụ Chineke ha, ị ga-ewusi ha ike. Chetara m na ị ga-akwado ha, ị ga-enyere ha aka. Biko bụrụ onye enyemaka m taa. Bụrụ ike m taa. Chetara m na i kwere nkwa na ị ga-ahụ mụ na ụmụ m n'anya ruo mgbe ebighị ebi na ị gaghị ahapụ anyị. Biko ka m zuru ike ma tukwasi obi na Gi, nyere m aka kuziere umu m otu ihe. N'aha Jisos, amen. (Jessica Thompson)
Ekpere maka mgbe ị na-eche naanị gị
Ezigbo Chukwu, daalụ na ị hụrụ anyị ebe anyị nọ, n’etiti ihe mgbu na mgba anyị, n’etiti ala ịkpa anyị. Daalụ maka ịchefughị ​​anyị, ị gaghị echefu ya. Gbaghara anyị ka anyị ghara ịtụkwasị gị obi, nwe obi abụọ banyere ịdị mma gị, ma ọ bụ ghara ikwenye na ị nọ n'ezie. Anyị na-ahọrọ ịtọgharị anyị na gị taa. Anyị na-ahọrọ ọ joyụ na udo mgbe etinyere ugha bịara na anyị ekwesịghị inwe ọ joyụ ma ọ bụ udo.
Daalụ maka ilebara anyị anya na ịhụnanya i nwere n’ebe anyị nọ dị ukwuu. Anyị ekwupụta mkpa anyị maka gị. Jupụta anyị na Mmụọ gị, mee ka obi na uche anyị dị ọhụrụ n'eziokwu gị. Anyị na-arịọ maka olile-anya gị na nkasi obi gị iji gaa n'ihu na-agwọ obi anyị ebe ha tiwara. Nye anyi obi ike ihu ụbọchị ọzọ, na-amata na gị na gị n’azụ ma n’azụ anyị enweghị ihe egwu. N'aha Jisos, amen. (Debbie McDaniel)
N'ezie na igwe ojii nke ịda mbà n'obi
Nna bi N’igwe, imeela n’ịhụ m n’anya! Nyere m aka mgbe m chere na igwe ojii nke ịda mba na-ebelata, itinye uche m na gị. Ka m hụperetụ ebube gị, Onyenwe anyị! Asi m ka m bia Gi nso kwa ubochi ka m na etinye oge n'ekpere na n'okwu Gi. Biko wusi m ike dika I nwere ike. Daalụ Nna! N'aha Jisos, amen. (Joan Walker Hahn)
Maka ndụ bara ụba
O Onye-nwe m, achọrọ m ibi ndụ zuru oke ị bịara nye m, mana ike gwụrụ m. Daalụ maka nzute m n'etiti ọgba aghara na ihe mgbu na ịhapụ ịhapụ m. Onyenweanyị, nyere m aka ilekwasị Gị na nanị Gị anya iji chọta ndụ bara ụba, ma gosi m na ndụ gị agaghị enwe ụfụ afọ. N'aha Jisos, amen. (Niki Hardy)
A ekpere maka olileanya
Nna nke Elu-igwe, daalụ na ị dị mma nakwa na eziokwu gị na-eme ka anyị nwere onwe anyị, ọkachasị mgbe anyị na-ata ahụhụ, na-achọ ma na-achọsike ọkụ ahụ. Nyere anyị, Onyenwe anyị, ka anyị nwee olileanya ma kwere na eziokwu Gị. N'aha Jisos, amen. (Sarah Mae)
Ekpere maka ọkụ n'ọchịchịrị
Ezigbo Onye nwe m, nyere m aka ịtụkwasị obi n'ịhụnanya gị maka m ọbụlagodi na enweghị m ike ịhụ ụzọ doro anya n'ọnọdụ m niile. Mgbe m nọ n’ebe gbara ọchịchịrị nke ndụ a, gosi m ìhè ọnụnọ gị. N'aha Jisos, amen. (Melissa Maimone)
Maka ebe efu
Ezigbo Nna Chukwu, taa a nọ m na njedebe onwe m. Agbalịrị m ma ghara imezi ọnọdụ dị iche iche na ndụ m, na oge ọ bụla m laghachiri n'otu ebe efu, na-enwe mmetụta nke owu na-emeri. Mgbe m na-agụ Okwu Gị, ọ bụụrụ m n’uche na ọtụtụ n’ime ndị odi n’Ihu gị kacha nwee okwukwe atachiwo obi n’ahụ ihe isi ike iji mụta ikwesị ntụkwasị obi Gị. Nyere m, Chukwu, ka m mata na n’oge nsogbu na ọgba aghara, are nọ n’ebe ahụ, na-eche m ka m chọọ ihu gị. Nyere m Onyenweanyị aka ịhọrọ Gị n’onwe m ma ghara inwe chi ọzọ n’iru Gị. Ndụ m dị n’aka gị. Daalụ Onyenwe anyị maka ịhụnanya, inye na nchekwa. A matara m na n'ọnọdụ nzuzo nke ndụ m, m ga-amụta ịdabere n'ezie na Gị. Daalụ maka ịkụziri m oge ọ bụla m bịara ebe m nọ, m ga-ahụ n'ezie na ị bụ ihe niile m chọrọ. N'aha Jisos, Amen. (Dawn Neely)
Mara: Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye ị hụrụ n'anya na-arịa ụjọ, ịda mba ma ọ bụ ọrịa isi ọ bụla, rịọ maka enyemaka! Gwa onye, ​​enyi gị, di ma ọ bụ nwunye gị, ma ọ bụ dọkịta gị. Enwere enyemaka, olile anya na ọgwụgwọ dịịrị gị! Egbula naanị gị.
Chineke na-anụ ekpere gị maka ịda mba
Otu n’ime ụzọ dị mma iji buso ịda mba bụ icheta nkwa na eziokwu dị n’Okwu Chineke. Lee ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ kachasị amasị anyị. You nwere ike ịgụkwu na nchịkọta akwụkwọ amaokwu anyị EBE A.
Onye-nwe-ayi n goesje n’iru unu, Ọ gānọye-kwa-ra unu; ọ gaghị ahapụ gị ma ọ bụ gbahapụ gị. Atụla ụjọ; adala mba. - Diuterọnọmi 31: 8
Ndi ezi omume n cryti nkpu, ma Jehova nānu ha; na-eme ka ha nwere onwe ha pụọ ​​n’ihe mgbu ha niile. - Abụ Ọma 34:17
Ejiri m ndidi chere Onyenwe anyị, Ọ chigharịkwuuru m wee nụ mkpu akwa m. Ọ dọpụtara m n’olulu ahụ tara ata, apịtị na slime; Ọ tukwasịrị ụkwụ m n’elu okwute wee nye m ebe m kwụ akwụ. Ọ tinyewo abù ọhu n'ọnum, bú abù otuto diri Chineke-ayi: ọtutu madu gāhu, tua egwu Jehova, tukwasi Ya obi. - Abụ Ọma 40: 1-3
Ya mere wedanụ onwe unu ala n'okpuru aka dị ike nke Chineke, ka o wee bulie unu elu mgbe oge ruru. Tụkwasị ya nchegbu gị niile n'ihi na ọ na-elekọta gị. - 1 Pita 5: 6-7
Nke ikpe-azu, umu-nna-ayi, umu-nne-ayi, ihe ọ bula bu ezi-okwu, ezi-okwu ọ bula, ihe ọ bula ziri ezi, ihe ọ bula nke di ọcha, ihe ọ bula nke mara nma, na ihe ọ bula di nma - ma ihe di nma ma-ọbu nke kwesiri otuto - chebaranu ihe ndia echiche. - Ndị Filipaị 4: 8
Nke gara aga Post Gara aga post:Kadịnal Parolin na Lebanon: Churchka, Pope Francis nọ gị mgbe ihe gbawara na Beirut
Next Post → Post ozo:Chee echiche taa na mmekọrịta ọ bụla ị nwere nke chọrọ ọgwụgwọ na idozi